Auto Trading N'ihi Oke Uru! - Mụọ ahia 2 Eprel 2021
Mụọ 2 Trade 2021 Ntuziaka Na Autozụ Ahịa Aka!
Ihe ngosi ahia onwe onye na-enye gị ohere ịzụta ma ree akụ site na enyemaka nke algorithm. N'ọnọdụ ụfọdụ, robot ịzụ ahịa akpaaka nwere ike nyochaa ahịa ego na-achọ ohere azụmaahịa, wee zitere gị mgbaama nwere ozi gbasara usoro ị ga-etinye.
N'ọnọdụ ndị ọzọ, usoro ịzụ ahịa akpaaka nwere ike ịnye ọrụ njikwa ogo ogo 360 - nke pụtara na algorithm ga-ere ahịa maka gị. Ihe ọ bụla ị họọrọ ka ọ dị gị mma, ọ dị oké mkpa na ị ga-eme nyocha banyere onye na-eweta ahịa ụgbọ ala tupu ị hapụ ego gị.
Ka emechara, ọtụtụ nke ụlọ ọrụ na-adịkwaghị ojoro nka na-eme ka ibu-obi ike na-ekwu na ego nke 'na-ekwe nkwa' uru ị pụrụ ime. N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị na-enyocha ins na outs nke etu esi arụ ọrụ ụgbọ ala na-arụ ọrụ, yana ihe ịkwesịrị ime iji chọta ndị kacha enye onyinye nke 2021.
Rịba ama: Ihe kachasị mkpa bụ na ị nwere ike igosipụta mmeri mmeri nke onye na-eweta ahịa ụgbọ ala ị họọrọ. Nke a nwere ike ibia n'ụdị akaụntụ ngosi, nnwale n'efu, ma ọ bụ nkwa ịkwụ ụgwọ ego.
Na nkenke, ịzụ ahịa akpaaka bụ usoro ịzụ na ire ere ego n'ụzọ akpaghị aka. N'ọtụtụ ikpe, ị ga-adabere na usoro algorithm nke emebere nke AI ma ọ bụ mmụta igwe na-akwado. A ga - arụzi algorithm ahụ iji nyochaa ahịa ego - ma ọ bụ nke ahụ, ebuka, ngwaahịa, ma ọ bụ mkpuchi - na-achọ ohere ịzụ ahịa. Ọ bụrụ na mgbe ngwanrọ ịzụ ahịa akpaaka na-eme nke ahụ, ọ ga - eleba anya na ịba uru site na ịmepụta azụmaahịa na-enweghị nsogbu.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na bot na-azụ ahịa bot na-arụ ọrụ na nyocha isi ụzọ abụọ dịka EUR / USD. Site n'enyemaka nke ndị na-egosi teknụzụ dị ka Bollinger Bands na RSI, enwere ike ịhazi bot akpaaka iji tinye usoro ịzụta mgbe a gafere ha abụọ. Nke a bụ n'echiche nke ịzụta ihe onwunwe mgbe - na nguzozi nke puru omume, mgbazi ahịa dị nso. Mgbe algorithm malitere, mgbe ahụ ọ na - achọpụta na EUR / USD kwesịrị ịzụ ahịa na ntinye ntinye nke 1.105.
Dabere na ụdị ndị na-eweta ahịa ụgbọ ala ị debanyere aha, bot ahụ nwere ike zitere gị akara ngosi oge na nkọwa nke nchọta ya, yana ọnụahịa ntinye na ụzọ ọpụpụ nke ekwesịrị itinye. Nwere ikike inyocha mgbaama ahụ n'onwe gị, ma ọ bụ gaa n'ihu itinye iwu ahụ. N'aka nke ọzọ, onye na-eweta ahịa akpaaka nwere ike ịnye ọrụ niile, nke pụtara na a ga-etinye iwu ntinye na ụzọ ọpụpụ na nnọchite gị.
Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, ị ga-azụ ahịa n'ụzọ zuru oke - na-enweghị ihe ọ bụla ị chọrọ iji nwee nkà ma ọ bụ ahụmịhe na ahịa ego. Dị ka nnukwu ụgbọ ala ịzụ ahịa ụgbọ ala nwere ike ịbụ maka ihe mgbaru ọsọ ego gị ogologo oge, ọ dị mkpa iburu n'obi na ọtụtụ ndị ohere na-achịkwa ojoro. Nke ahụ bụ ịsị, ebe onye na-eweta ya nwere ike ikwe nkwa nloghachi nke 90% ma ọ bụ karịa, nke a adịkarịghị. Dị ka ndị dị otú a, ọ dị oké mkpa na ị na-eme ihe omume ụlọ akwụkwọ gị tupu ịzụrụ robot na-azụ ahịa akpaaka maka oge mbụ.
Kedu ihe bụ uru na ọghọm nke azụmaahịa akpaaka?
Zụọ ahịa ego na-enweghị inch nke ihe ọmụma banyere otu esi etinye ego
Zuru okè ma ọ bụrụ na ịnweghị oge ịzụ ahịa
Enyele ohere irite n'ezinụlọ ego iyi
Akpụkpọ ụkwụ bots nwere ike ịzụ ahịa ọ bụla na klas ọ bụla
Fọdụ ndị na-enye ọrụ na-enye ọrụ zuru ezu akpaghị aka
Teknụzụ dị na ya na-adịkarị mma karịa ndị ahịa mmadụ
Ọtụtụ azọrọ hyperbole nke ndị na-enye ọrụ nyere
Naanị ọnụọgụ nhọrọ nke nyiwe ziri ezi na oghere
Ofdị Ndị Na-enye Autozụ Ahịa
Yabụ ugbu a ị matara ihe bụ isi nke ihe eji azụ ahịa ụgbọ ala bụ n'ezie, ugbu a anyị ga-agbaji ụdị dị iche iche nke ndị na-enye ọrụ na ahịa.
Ọkara Nchekwa onwe site na Ama
Mgbe anyị na-ezo aka na ndị na-ere ahịa ụgbọ ala, ndị a bụ nyiwe nke na-arụ ọrụ akụkụ, ma ọ bụghị ihe niile, nke usoro ntinye ego na njedebe. N'ọtụtụ ikpe, ọkara akpaaka ahia n'ịntanetị nyiwe na-enye aro ahia site na akara ngosi. Ka anyị were Mụta 2 Trade algorithm dị ka ihe atụ kachasị. Teknụzụ dị n'okpuru - nke algorithm dị elu na-akwado ya, na-enyocha Forex trading na ahịa cryptocurrency na ndabere 24/7. Ozugbo algọridim ahụ nwere ohere ịnweta ego, ọ ga-ezigara ndị ọrụ ọrụ mgbaàmà.
Dịka ọmụmaatụ, mgbaàmà ahụ nwere ike ịnwe ozi ndị a:
Akụ: BTC / USD
Akara: RSI na-atụ aro ịkefela ókèala
Ntinye: $ 9,689
Nkwụsị-Ọnwụ: $ 9,980
Were-Uru: $ 9,410
Dịka ị pụrụ ịhụ site na ihe atụ dị n'elu, 90% nke usoro itinye ego na njedebe ejirila rụọ ọrụ. Nke a bụ n'ihi na achọghị onye ahịa ahụ n'onwe ya iji chọpụta ahịa ego. Kama nke ahụ, e kenyere akụkụ a nke usoro ihe eji arụ ọrụ na algorithm.
Ozugbo ndị ahịa natara akara, ha nwere nhọrọ atọ. Onye ahia ahụ nwere ike ịhọrọ ime nchọpụta nke onwe ya tupu ịtọba ahịa ahụ; dobe ahia ahụ ozugbo; ma ọ bụ nanị etinyeghị ahịa ọ bụla. N'ụzọ dị oke mkpa, ụdị ọrụ ọrụ ụgbọ ala a kachasị mma maka gị nke chọrọ irite uru site na ikike dị elu nke AI na mmụta igwe, mana n'otu oge ahụ, nwee ikike ịchịkwa azụmaahịa gị.
Ofụri Esịt-Akpaghị Aka Trading
Dị ka aha ahụ na-egosi, ndị na-enye ọrụ akpaghị aka na-elekọta usoro ntinye ego niile na njedebe. Nke ahụ bụ ịsị, ozugbo etinyechara ego gị n'aka ndị na-eweta ọrụ, a gaghị achọrọ gị ịme ihe ọ bụla.
Banyere ihe ndị bụ isi, usoro nyocha ahụ na-arụ ọrụ otu ihe ahụ anyị tụlere na ngalaba dị n'elu, ma ọ bụrụ na teknụzụ ga-achọ ịchọta ụbọchị trading ohere gburugburu elekere. Otú ọ dị, isi ihe dị iche bụ na ozugbo ohere ịchọta algorithm, ọ ga-aga n'ihu itinye ahịa ahụ n'aha gị.
N'otu aka, nhọrọ a dị mma ma ọ bụrụ na ịnweghị ihe ọmụma ma ọ bụ ahụmịhe nke ahịa ego. Nke a bụ n'ihi na a gaghị achọ ka ị nyochaa akara ngosi azụmaahịa nke algorithm na-ahụ. Kama nke ahụ, ị ​​na-enyefe bot ahụ ka ọ bụrụ ebe ịzụta na ire ere maka gị. N'aka nke ọzọ, ọ dị mkpa ka ị nwee ntụkwasị obi na ọrụ azụmaahịa na-akpaghị aka zuru oke. A sị ka e kwuwe, ịchọghị ịnọ n'ọnọdụ ebe bot na-etinye ahịa na-efunahụ ya ma efufu ahia.
Ahịa Nchekwa onwe
Nhọrọ nke atọ ị nwere bụ iji ọrụ azụmaahịa enyo. Nke a bụ ebe ị na-ahọrọ onye na-etinye ego n'oge nwere nke nwere ndekọ ndekọ doro anya na ahịa azụmaahịa, wee detuo pọtụfoliyo ha dị ka-maka-dị ka.
Ga na-atụgharị uche ahịa ọ bụla ga-eme n'ọdịnihu nke onye ahụ na-eme. Nke a na - enye gị ohere irite uru na nka onye ahịa nwere ọsịsọ, ma n'otu oge ahụ achọghị ka ị mata etu itinye ego n'ọrụ.
N'echiche a, ịzụ ahịa enyo ka na-agbaso otu ụkpụrụ ahụ dị ka mgbatị ụgbọ ala nke dabeere na AI, ebe usoro niile ahụ na-agafe agafe. N'ihe banyere ndị na-enye ọrụ, nyiwe dị ka eToro na-enye gị ohere idetuo azụmaahịa na ntinye opekata mpe nke $ 200, ma ị ga-enwe nkụda mmụọ nke ndekọ ndekọ ahịa azụmaahịa na saịtị ahụ.
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịtụle onye na-eweta akaụntụ PAMM. Nke a bụ ebe a na - ejikọ ego gị yana ọkachamara azụmaahịa. The ozu ahia ga-azụta na-ere akụ na n'ihi gị. Na nloghachi, ha ga enweta oru ha na uru obula ha ritere gi.
Kedu Akụ M Nwere Ike Inwe Azụmaahịa?
Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke oghere ahịa akpaaka na-achịkwa Forex na cryptocurrencies. Nke a bụ n'ihi na klas abụọ na-azụ ahịa na 24/7 ndabere, ha abụọ na-erite uru site na oke mmiri na azụmaahịa. Na na kwuru, e nwere ndị na akpaaka trading nyiwe na-ekpuchi ọtụtụ akpan owo klas. Nke a gụnyere ihe niile sitere na ebuka, indices, ike, ọla siri ike, ọnụego ọmụrụ nwa na agbụ.
N'ụzọ dị oke mkpa, ọ kachasị mma ịhọrọ bot na-azụ ahịa ụgbọ ala nke metụtara otu klas nke ị nwere ike iru ala. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-achọ inweta ohere na mbara igwe na-enweta ọtụtụ ijeri dollar, ọ kachasị mma ka gị na onye na-eweta ọrụ na-elekwasị anya ego na obere.
Kedụ ka ọrụ azụmaahịa azụmaahịa si arụ ọrụ?
N'ihe banyere usoro itinye ego, nke a dabere na ụdị usoro azụmaahịa akpaaka ịchọrọ iji were. Site na nke a, ọtụtụ n'ime ndị na - agụ akwụkwọ anyị na - ahọrọ iji ọrụ azụmaahịa na - akpaghị aka, ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe ọ bụla achọrọ iji nyocha ma ọ bụ tinye iwu.
Dị ka ndị dị otú a, usoro ndị a na-egosi gị otu ntinye ego ga-esi rụọ ọrụ mgbe ị na-eji onye na-eweta ahịa ụgbọ ala nke na-enye ọrụ niile.
Ọnụ ego ntinye ego pere mpe
Nke mbu, ikwesiri ihu ego ole na ole iji rụọ ọrụ ọrụ ụgbọ ala. Ọnụ ego a kapịrị ọnụ nwere ike ịdịgasị iche dabere na onye na-eweta ya na ụdị akaụntụ ịchọrọ. N'ọtụtụ oge, anyị na-achọpụta na nkwụnye ego kacha nta na-amalite na $ 250.
✔️ Mee ọ rụọ ọrụ akpaghị aka
Onye na-eweta ahịa akpaaka ga-achọ ịnweta ikike n'aka gị. Nke a gosiputara na ị nwere obi uto maka onye na-eweta ya ịzụta na ire akụ na nnọchite gị. Ọ bụrụ na ịgbanyeghị njirimara akpaghị aka, mgbe ahụ ị ga-enweta ya Forex n'ókè. Ga - emezi ihe ị na - egosi.
✔️ Tụọ Ogologo Ahia
Then ga-ahụ mkpa ịtọ ụfọdụ trading kwa. A sị ka e kwuwe, o nwere ike ị gaghị achọ ka bot na-ere ahịa gị niile na otu usoro. Dị ka nke a, tinye ego kachasị ịchọrọ ịchọrọ na mgbaàmà ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị debere $ 1,000 n'elu ikpo okwu. Ọ bụrụ n’ịchọghị itinye ihe karịrị 5% nke nguzozi gị n’ahịa ọ bụla, gbaa mbọ hụ na ị gosipụtara nke a.
Ga-enwerịrị nnwere onwe nke ịbanye na njedebe nkwụsị na-aba uru. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịchọghị ida karịa 3% na azụmaahịa ọ bụla. N'otu aka ahụ, ị ​​nwere ike ịchọrọ ị nweta uru nke 5% kwa ahia, ma mechie ọnọdụ ahụ mgbe nke a kpatara. Site na nke a, ọ ga - akachasị mma ịhapụ ntinye ntinye na npụpụ ahịa na algorithm.
✔️ Anya nnụnụ
Azụmaahịa ọ bụla nke bot na-azụ ahịa azụmaahịa na-anọchite anya gị ga-abụ nke a na-ahụ anya site na ọnụ ụzọ akaụntụ gị. Ọ bụghị naanị na nke a na-enye gị ohere ịlele ego ole ị na-akpata ma ọ bụ na-efunahụ, mana nke dị oke mkpa - ma bot ahụ ziri ezi maka ihe ịchọrọ onwe gị. Ọ bụrụgodị na bot is na-eme gị ezigbo ego, ị nwere ike ịchọpụta na atụmatụ ya dị oke egwu maka ịchọrọ.
Imirikiti nyiwe azụmaahịa na oghere na-enye gị ohere ịdọrọ ego gị yana na mgbe ị hụrụ na ọ dị mma. Ọ dị ezigbo mkpa ka ị kwadobe nke a tupu ịdebanye aha, ebe ị na-achọghị ka akpọchi ego gị maka oge mgbapụta opekempe.
Ozugbo ị rịọrọ nkwụghachi, a ga-ezigaghachi ego ahụ na usoro ịkwụ ụgwọ gị n'ime ụbọchị ole na ole.
Inweta Ego na Platform Auto Trading
Mgbe a bịara n'inweta ego na ebe ị na-azụ ahịa akpaaka ị họọrọ, nke a dabere na ROI (laghachi na ntinye ego). Ọ dịghị mfe dịka ịba ụba ego gị niile site na mmeri, n'ihi na ọ dabere na ole a na-etinye site na ahia. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ị tinye $ 250 n'ime ikpo okwu ahụ, bot agaghị etinye $ 250 na azụmahịa ọ bụla ọ na-eme. Kama, ọ nwere ike ekenye 1-2% na azụmaahịa egwu dị oke elu, yana 3-5% na azụmaahịa dị ala na ọkara.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-etinye $ 5,000 n'ime ikpo okwu nke na-enye ọrụ azụmaahịa na-akpaghị aka.
The bot ize ndụ 5% na ahia 1, nke ruru $ 250. Ahia ahụ nwetara 4% uru ($ 10)
The bot ize ndụ 2% na ahia 2, nke ruru $ 100. Ahia ahụ nwetara 30% uru ($ 33)
The bot ize ndụ 1% na ahia 3, nke ruru $ 50. Ahia ahụ furu efu 1.5% ($ 0.75)
Dịka ị pụrụ ịhụ site n'elu, bot ahụ mere $ 10 na $ 33 site na ahịa 1 na 2, wee fuo $ 0.75 na ahia 3. Nke a na-ewe uru zuru ezu na dollar na cents na $ 42.25. Na usoro nke ROI gị, nke a ruru 0.845%. Agbanyeghị na ọnụọgụ a nwere ike ịdị obere, ọ dị mkpa ka anyị cheta na nke a metụtara naanị ahịa atọ.
Auto robot ga-etinye ọtụtụ ahịa kwa ụbọchị, yabụ uru gị nwere ike ịmalite ịgbakwunye. N'ụzọ dị oke mkpa, ihe atụ ndị dị n'elu na-egosi atụmatụ enweghị ihe egwu dị na nsogbu ebe ihe karịrị 5% nke pọtụfoliyo ahụ na-agbanye n'otu azụmahịa. Y’oburu n’acho igbanwe nchekwube karie nkea, igbubiri oke onu ogugu kariri.
Ego ole ka Auto Trading Robot na-efu?
Ọzọkwa, ọ dịghị iwu siri ike na ngwa ngwa banyere ego ịzụ ahịa akpaaka ga-efu gị, ebe ọ nwere ike ịdị iche iche. N'ikwu nke a, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-enye ọrụ anyị na-akwado ga-arụ ọrụ na ụdị ọrụ ọrụ. Nke a pụtara na ikpo okwu ga-enweta pasent nke ọ bụla na-emeri mmeri ọ bụla ha na-eme n'ihi gị.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na onye ị họọrọ nwere ọrụ inye 10% ọrụ:
Invest itinye $ 2,000 n'ime akpaaka trading n'elu ikpo okwu
Ikpo okwu a na-eme ahia 100 n’ime ọnwa niile
ROI ruru 15%, nke ruru $ 300
Ikpo okwu ga-ewere ọrụ 10% ya, nke bụ $ 30
Nke a ga - eme ka ị nweta $ 270 na uru
Anyị ga-arụ ụka na nhazi ọrụ dịka akọwapụtara n'elu bụ nke kachasị ụdị ọnụahịa kachasị dịịrị gị. Isi ihe kpatara nke a bụ na ikpo okwu na-akpata ego naanị mgbe ha bara uru. Dị ka ndị dị otú a, ndị na-eweta ọrụ nwere ego iji tinye ahịa na-atụ egwu maka gị, na-ebuli ROI gị elu. N’ụzọ dị mkpa, ka ị na-enwekwu ohere ịzụ ahịa akpaaka maka gị, otú ahụ ka ha na-emekwu onwe ha.
Otu esi ahota ebe ahia di iche iche
Enweghi obi abụọ, akụkụ kachasị sie ike nke usoro ịzụ ahịa ụgbọ ala na-achọta onye na-eweta nkwenye. Dịka anyị kwuru na ntuziaka anyị niile, ọtụtụ ndị na-enye ọrụ na mbara igwe ga-azọrọ na ha ga-alaghachi ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ. Enweghị uru dịka uru dị na ahịa ahịa, dịka ọbụlagodi ụlọ azụmaahịa kachasị aga nke ọma na ụwa ga-enwe ọnwa na-efufu oge. Nke a bụ naanị ụdị egwuregwu ahụ.
Dịka, enwere ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịlele anya mgbe ị na-ahọrọ usoro ịzụ ahịa akpaaka.
Mkpụrụ metrik kachasị mkpa ịchọrọ iji chọpụta bụ ma ị nweghị ikike iji gosipụta mmeri mmeri nke onye na-eweta ya na-akpọsa. Iji maa atụ, ọ bụrụ na anyị agwa gị na anyị nwere ike ime gị ROI e kwere nkwa nke 40% kwa ọnwa, kedu ka ị ga-esi mara ma anyị na-ekwu eziokwu? N'ọtụtụ ikpe, ị naghị - dịka ị gaghị enwe ike ịbanye na robot na-ere ahịa ruo mgbe ị tinyere ego.
N'otu aka, anyị ghọtara ihe kpatara ndị na-enye ọrụ anaghị ebipụta nsonaazụ azụmaahịa ha mere na mpaghara ọha. Ọ nwere ike iwe ọtụtụ afọ iji zuo oke algorithm, yabụ ọ dị mma na ikpo okwu achọghị ka ekesa ozi a kpamkpam. N'aka nke ọzọ, onye na-eweta ọrụ kwesịrị ịwụnye ọtụtụ ihe nchedo na-enye gị ohere ịchọpụta ịdị irè nke ọrụ ahụ tupu ịme nnukwu ego.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ikpo okwu na-enye akaụntụ ngosi, nke a ga-enye gị ohere ịnwale akara ngosi ọ bụla tupu ị tinye ego gị. Ọ dịkwa ịrịba ama ma ọ bụrụ na onye na-eweta ya na-enye nnwale n'efu ma ọ bụ nkwa ịkwụghachi ego, n'ihi na nke a ga-enye gị ohere ịdọrọ itinye ego gị na azụ na afọ ojuju na afọ ojuju
Aha na ntukwasi obi
Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji chọpụta ịtụkwasị obi nke robot na-azụ ahịa bụ ịrụ ụfọdụ ọrụ ụlọ nke gị. The internet na-jam-juru na reviews na ratings nke akpaaka trading ọrụ, otú ị ga-esi na-eri nri na ahụmahụ nke ugbu a na n'oge gara aga ọrụ. Ọ bụrụ na nkwenye zuru ezu bụ na robot ahịa na-arụ ọrụ nke ọma, nke a bụ mmalite dị mma.
I kwesịkwara ịchọpụta ịtụkwasị obi nke onye na-eweta ya n'onwe ya. Dịka ọmụmaatụ, onye na-akwado ụgbọ ala na-azụ ahịa ụgbọ ala, ogologo oge ole ka ikpo okwu na-azụ ahịa? Enwere ụzọ isi soro onye na-eweta ya kwurịta okwu na ekwentị, ma ọ bụ na ihe niile dị mkpa iji gafere ozi ịntanetị?
Imirikiti ndị na-ere ahịa ụgbọ ala na oghere na-enye ọrụ zuru oke. Site na nke a, anyị pụtara na ị ga-elele azụmaahịa ọ bụla ikpo okwu na-eme n'aha gị. N'ụzọ dị oke mkpa, nke a na-enye gị nnụnụ anya zuru oke banyere ụdị ihe egwu na atụmatụ nke bot na-ewere. Na nke ahụ kwuru, ụfọdụ ndị na-enye ọrụ gosipụtara naanị uru na ọghọm gị, n'amaghị ebe ego itinye ego gị na-aga. Anyị ga-atụ aro izere nyiwe dị ka nke a.
Akwụ ụgwọ na isslọrụ
Ikwesiri inyocha onu ahia nke iji ahia ahia. Anyị ga-atụ aro ịlaghachi azụ na nke a, ebe ọ bụ na ị gaghị ekpebi mkpebi gị naanị na ọnụahịa. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị were nyiwe azụmaahịa abụọ dị iche iche - nke na-ebo ọrụ 30% ọrụ, yana nke na-ebo 5% ụgwọ.
Echiche mbụ gị nwere ike ịhọrọ ikpo okwu na-enye nnukwu ọrụ 5% ọrụ, ebe ị chere na ọ na-enye nnukwu uru. Agbanyeghị, nke a nwere ike ọ gaghị abụrịrị ikpe ahụ. Dịka ọmụmaatụ, gịnị ma ọ bụrụ na ndị na-eweta ihe dị oke ọnụ na-eme nloghachi nke 20% kwa ọnwa, ebe ikpo okwu na-akwụ ụgwọ dị ala karịa 3%?
Ọfọn, ka anyị were ọnụ ọgụgụ dị ngwa - dabere na ntinye $ 10,000
Onye na-eweta 1 na-eme nloghachi nke 3%, nke pụtara na ntinye $ 10,000 gị na-eweta $ 300 kwa ọnwa. Ndị na-eweta ọrụ na-ebo 5% ọrụ, yabụ na ị ga-eji $ 285 nweta uru.
Onye na-enye onyinye 2 na-eme nloghachi nke 20%, nke pụtara na ntinye $ 10,000 gị na-eweta $ 2,000 kwa ọnwa. The eweta ebubo a whopping 30% na ọrụ, otú ị pụọ na $ 1,400 na uru.
Dịka ị pụrụ ịhụ site na ihe atụ dị n'elu, ị ka mma ịhọrọ onye na-eweta ọrụ na-akwụ ụgwọ nnukwu ọrụ na nkwụghachi maka uru dị elu karịa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga-atụ anya ịkwụkwu ụgwọ maka usoro egosipụtara nke na-eweta ROI mara mma mgbe niile.
Ikwesiri inyocha ụdị akụ nke onye na-eweta ahia. Iji maa atụ, ị na-achọ ụgbọ ala mgbanaka na-azụ ahịa nke na-azụ ma na-ere ego, ka ị nwere mmasị karịa ngwaahịa dị ka gold, mmanụ, na gas? Na nke ahụ kwuru, ọ nwere ike ịba uru ịhọrọ onye na-eweta ọrụ nke na-enye gị ohere ịme klaasị ọtụtụ klaasị. N'ime ime nke a, ị ga-enwe ohere kachasị mma nke ịmepụta pọtụfoliyo dị iche iche.
Ebe kacha mma na-enye ndị mmadụ saịtị na 2021
Na-achọ nyiwe akpaaka kachasị mma nke 2021, mana ejighị n'aka ebe ị ga-amalite? N'okpuru ị ga-ahụ ndị na-enye anyị ọkwa kachasị elu ugbu a n'ahịa. Dị ka oge niile, gbaa mbọ hụ na ịme nyocha nke gị tupu ịdebanye aha gị!
Ndị na-ere ahịa onwe ha na-enye gị ohere ịnweta ahịa ego n'ụzọ zuru oke. Site na ikwe ka algorithm di elu karie ichoputa ma debe ahia n'aha gi, i nwere ohere inweta uru na-achoghi ime oru obula. Nke a bara uru ma ọ bụrụ na ịnweghị ahụmịhe na oghere itinye ego, ma ọ bụ na ịnweghị oge ịzụ ahịa.
Na tụgharịa n'akụkụ, akụkụ siri ike bụ ịchọta akpaaka trading n'elu ikpo okwu na ị pụrụ ịtụkwasị obi. A sị ka e kwuwe, ọ dị mfe iji nkwuwa okwu na-ekwu - yabụ ịkwesịrị inwe ike nyochaa izi ezi nke onye na-eweta ọrụ tupu gị ekee ego gị. Iji nyere gị aka n'okporo ụzọ, anyị tụlerelarị usoro mgbanaka mgbanaka anyị kacha elu nke afọ 2021. Dị ka oge niile, hụ na ị na-eme ihe omume ụlọ akwụkwọ gị tupu ịmalite - dịka nyocha dị oke mkpa!
Platforms nwere nyiwe azụmaahịa na-akwụghị ụgwọ ọ bụla dị mma?
Usoro nke ịmepụta na iwulite algorithm ahia dị elu nwere ike were ọtụtụ afọ zuru oke. N'ezie, teknụzụ chọrọ tweaking oge niile iji hụ na ọ nwere ike karịa ahịa ndị a na-agbanwe agbanwe. N'iburu nke ahụ n'uche, gịnị kpatara onye na-ere ahịa ụgbọ ala ga-eji nye ha Ihe Nzuzo Nzuzo n'efu, mgbe ọ chọrọ mgbalị dị ukwuu iji wuo? N’ụzọ dị oke mkpa, ị nwetara ihe ị kwụrụ n’ime oghere azụmaahịa na akpaaka.
Ekwesịrị m iji ndị na-eweta azụmaahịa na-enye ọrụ nke ndị ọrụ?
Ndị na-enye ahịa azụmaahịa na-arụ ọrụ na Kọmitii bụ ndị ị kwesịrị ị na-eche. Nke a bụ n'ihi na onye na-eweta ọrụ ga-enwe mkpali na ego iji mee ka ị nwee nnukwu ego dị ka o kwere mee. N'otu oge ahụ, a chọghị onye na-eweta ọrụ ka ọ hapụ koodu nke isi nke algorithm na-ere ahịa ya, yabụ ọ nwere ike hụ na atụmatụ ya na-anọ naanị ya.
Gini bu usoro ikpo okwu akpaka?
Ọfụma ahịa azụmaahịa na-elekwasị anya na akụkụ nyocha nke usoro azụmaahịa. Ozugbo algorithm achọpụtala ohere ịzụ ahịa, ọ ga-ezitere gị ọnụahịa ntinye na ụzọ ọpụpụ chọrọ. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ maka itinye trades ahụ n'onwe gị, na onye na-amasị gị ahịa.
Robgbọ ala ịzụ ahịa ụgbọ ala nwere ike ịzụtara m?
Kpamkpam. Ọ bụrụ na ịdebanye aha na onye na-eweta ọrụ na-enye ọrụ niile, a ga-etinye ahịa niile n'aha gị.
Kedu ka esi eji azụmaahịa na-akpaghị aka enyocha ahịa ego?
A na-akwado teknụzụ dị n'okpuru ya site na teknụzụ dị oke ọnụ dị ka AI na mmụta igwe, yana ọtụtụ njirimara teknụzụ.
Kedu klas ndị nwere akụ na-azụ ahịa ahịa na-echekwa?
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụgbọ ala na-azụ ahịa ụgbọ ala na-elekwasị anya na Forex na ahịa cryptocurrency, ọtụtụ na-enyocha klas na-akwado.
Kedụ ka m ga-esi akwụ ụgwọ servce akpaaka?
Nke a dabere na ụdị ọnụahịa nke ndị na-eweta ọrụ were. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-eji usoro ikpo okwu na-akwụ ụgwọ ọrụ, mgbe ahụ ị ga-achọ ịnweta ego nkwụnye ego kacha nta, nke a ga-agbakwunye na njikwa azụmaahịa gị. ọ bụrụ n ’ị na-azụta sọftụwia nwegasịrị akụrụngwa, ị ga-akwụkarị ụgwọ ị ga-akwụ.